घट्यो कोरोना परीक्षण शुल्क, नयाँ कति ? - Everest Dainik - News from Nepal
घट्यो कोरोना परीक्षण शुल्क, नयाँ कति ?
काठमाडौंः स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको पिसिआर परीक्षणमा तिर्नुपर्ने शुल्क परिमार्जन गरेको छ ।
यसअघि ५ हजार ५ सय कायम रहेको पिसिआर परिक्षण शुल्क परिमार्जन गरी मन्त्रालयले अधिकतम शुल्क ४ हजार ४ सय शुल्क कायम गरेको हो । बजारमा कीट लगायत परीक्षण सामग्रीको मुल्य घटेसँगै परीक्षण शुल्क पनि घटाइएको मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डाक्टर समिर अधिकारीले जानकारी दिए । शुल्क लिएर परीक्षण गर्न ११ वटा निजी अस्पताललाई अनुमति दिइएको छ ।
अब मन्त्रालयले सङ्क्रमितको निकट सम्पर्कमा आएका, लक्षण देखिएका र अग्रभागमा काम गर्ने व्यक्तिहरूको मात्र निःशुल्क परीक्षण गर्नेछ। उक्त निर्णय आइतबारदेखि नै लागु भएको छ ।
देभभर ११ निजीसहित ४५ वटा प्रयोगशालामा कोरोना परीक्षणका लागि पिसिआर परीक्षण हुँदै आएको छ ।
याे पनि पढ्नुस काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमित संख्या ३६९ पुग्यो